कस्तो दिन! | Martech Zone
मङ्गलबार, जुन 13, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
जोन सोडाबाट मेलमा प्याकेज प्राप्त गरेपछि मेरी छोरीले मलाई आज कल पठायो। यो कम्पनी अविश्वसनीय छ! कामको लागि धन्यवादको रूपमा मैले एक कस्टममा गरें मेरो जोन्स संगीत एमपी3प्लेयर छाला, जोन्स एक धन्यवाद पैकेज पठाईयो। वाह! यसले स्वेटशर्ट, केही बम्पर स्टिकरहरू, केहि अन्य स्टीकरहरू, एक किचेन, लिप बाम, र एक पिन समावेश गर्दछ !!! म यो कम्पनीको बारेमा पर्याप्त भन्न सक्दिन। उनीहरूको मार्गबाट ​​बाहिर जान वास्तवमै धेरै भन्छ। जोन्स सोडा पिउनुहोस् !!!
त्यसोभए मैले सोचें कि वास्तवमै मेरो दिन भयो ... तर यो केवल सुरुवात हो।
मेरो कारमा हिंड्दा, एक जना मानिस मतिर ठेस खाए जो उसको दाहिने पट्टि रक्तश्राब हुँदै थियो। उनले मलाई छुराले घेरिएको बताए। मैले उसलाई सडकको पेटीमा राखिदिएँ र उहाँको शर्ट तान्दै। उसले आफ्नो छेउमा २ चाकूको घाउ भएको रगत बहाउँदै थियो। यसमा समात्नु मैले केही पनि पाइनँ, त्यसैले मैले एउटा हातले घाउमा धकेलें र अर्को हातमा पुलिसलाई बोलाएँ। ऊ एकदम दुखेको थियो र रगत को एक बिट गुमाएको थियो। प्यारामेडिक्स आए र उसलाई अस्पताल लगियो। मैले राम्रो २० मिनेट उसको पक्षमा पक्रेको थिए र रक्तस्राव बन्द भएको थियो। कसैले मलाई रेष्टुरेन्टबाट सफा लुगा दिए।
प्यारामेडिकले उसलाई तान्न he०/50० मौका रहेको प्रहरीलाई भने। त्यस व्यक्तिको नाम डेल थियो र उनी 50२ वर्षका थिए। मैले सफा गरिसकेपछि, मेरो विचारमा पुलिसमा दुई जना साक्षी थिए जसले छुरा प्रहार गरे र तिनीहरूले चक्कु भेट्टाए। मलाई थाहा छैन कसरी डेलले यो बनाएको हो भनेर थाहा पाउन कसरी, यद्यपि। डेलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
त्यसो भए ... कस्तो दिन! म सहि आभारी छु कि म सही समयमा सही ठाउँमा छु। मसँग डेलको छेउमा र वेट्रेसले समातेकोमा मात्र १ अन्य व्यक्ति थिए जो मलाई सफा कपडा दिए। इन्डियानापोलिसको यस्तो व्यस्त कुनामा त्यो अलि अस्वस्थ छ। म हरेक दिन त्यस सडकमा हिंड्छु र मेरो कारबाट।
डेलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्!
अद्यावधिक गर्नुहोस्: यहाँ छ पुलिस रिपोर्ट.
वेब २.० को साथ गोल्डको लागि खन्न
१ Mag.14.99 XNUMX को मूल्यको म्यागजिन